I-Indonesia yizwe elinesiko eliyingqayizivele nelingavamile . Kusuka lapha ungaletha izinto ezimangalisayo nemisebenzi yezandla ezokukhumbuza uhambo. I-Souvenirs e-Indonesia ayithengi, kodwa lokhu akusho ukunganaki ikhwalithi yabo. Uma uhamba neqembu nomhlahlandlela, kunesikhathi sokuthenga okuhlelekile, bese ukhumbula ukuthi amanani azoba ngamahora angaphezu kuka-2-3 abizayo. Kungcono ukuhamba ngokwakho emigqeni yokuhweba, izintandokazi nezitolo.
Izici zokuthenga e-Indonesia
Isimiso esiyinhloko sezimakethe zase-Asia siwusebenzisana. Kubathengisi lolu hlobo lokuzijabulisa. Ngezinye izikhathi babeka ngokukhethekile inani eliphakeme lokuheha izimpahla. Ukukhathazeka komthengi kuvame ukuholela eqinisweni lokuthi abathengisi balungele ukunikeza izimpahla zabo nge-pittance. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uxoxisana, futhi ukwazi ukuthenga imikhiqizo eyingqayizivele ngamanani aphansi.
Abantu base-Indonesi bangabakhono abanekhono. Emadolobheni amakhulu nasemadolobheni aseziqhingini, benza izinto ezimangalisayo. Amadoda ikakhulukazi ahlanganyela ekukhunzeni izinkuni, nabesifazane - ukudweba. Umkhiqizo ngamunye ukhethekile, ngoba konke kwenziwa ngesandla.
Yini ongayithenga e-Indonesia?
Ukuthengwa okuthandwa kakhulu kwezivakashi kungukuthi:
I-Souvenirs eyenziwe ngamapulangwe. Amakhosi asekhaya ayaziwa ngokuthi aqoshe izinkuni zawo, ngakho-ke emigwaqweni uzothola abathengisi abaningi bemifanekiso yamapulangwe. Abantu base-Indonesia bathanda imifanekiso ngesimo samakati futhi bawabeka emshadweni wabo njengophawu lokuthanda nokuthula okuphakade. Izindleko ze-gizmo enjalo zingashintsha kusuka ku-$ 1 ukuya ku-$ 20 kuye ngobukhulu kanye nomhlobiso. Iningi lemikhumbuzo eyenziwe ngokhuni e-Indonesia lenziwa eB Bali .
Izindwangu. Amakhosi ase-Indonesian basebenzisa indlela ye-batik yokudweba indwangu, okusho "ukwehla kwe-wax". Ngosizo lwakhe upende udoti. Imikhiqizo eyinhloko igqoka, izibazi, izibopho, izibazi. Indwangu enhle kakhulu ingathengwa eJakarta emakethe yePasar Beringharjo. Abantu base-Indonesia badala indwangu eyenziwe ngezandla ngokusetshenziswa kwegolide nesiliva. Ibizwa ngokuthi i-singlet. Ukusuka kuso gqoka izingubo ezihle, isibonelo, somshado.
Ifenisha ye-Wicker. Yena e-Indonesia uthathwa njengomsebenzi wobuciko. Ifenisha yenziwe ngamagatsha esundu, imivini ne-rattan. Imikhiqizo inhle futhi ihlala njalo. Izinto zokungena ngaphakathi zingcono ukuthenga eziqhingini , lapho izintengo ziqala ngo-$ 20. Emadolobheni amakhulu, imikhiqizo efanayo ingabiza izikhathi ezingu-10 ezibizayo.
Amabhlogo. Isipho esihle esingasuswa e-Indonesia, siyoba umhlobiso. Izintengo zemikhiqizo ezivela ezinsimbi eziyigugu lapha zihlukile ezifuywayo naseYurophu. Emigwaqweni yase-Indonesia kunezitolo eziningi zomlobi, lapho imihlobiso idayiswa khona kukhophi eyodwa. Futhi, umthengi angalawula umkhiqizo wakhe, futhi i-jeweler izokwenza lapho. Ngaphezu kokuhlobisa, ama-Indonesi enza i-silverware.
Izimonyo. I-Cosmetics iyoba yisikhumbuzo esiwusizo esivela e-Indonesia. Kodwa ekukhethweni kwakhe kufanele kuthathwe ngokungathí sina. Ezimakethe zendawo, uzothola izitolo eziningi ezithengisa amafutha ashibhile, ama-creams, ama-shampoos, ama-blends kanye namafutha angcono. Abavakashi abahlangenwe nakho baxwayiswa ukuba bathengise ezitolo ngezikhungo ze-SPA. Ochwepheshe esitolo esinjalo uzokunikeza iseluleko futhi aqhube ukuvivinya umzimba. Kodwa imikhiqizo ethengwe emakethe ingabangela izinkinga ezinkulu zezempilo kuze kube yilapho izimo zithinta.
Imikhiqizo. E-Indonesia, enye yekhofi ebiza kakhulu emhlabeni wonke ikhiqizwa - uLuvak. Iqoqwe ngesandla ngezigaba ezincane. Intengo iqala ngo-$ 50 nge-100 g. Futhi, ungaletha isipho esivela e-Indonesia i-jasmine itiye nobusi, okungeyona neze efuywayo futhi ifana ne-ukhilimu obukhulu. Uma unquma ukuthenga izinongo nezithelo, kungcono ukuya kunoma iyiphi imakethe yendawo. Izithelo zithenga kancane kancane - ngakho ngeke zihlasele indiza.
Izingubo. I-Indonesia indawo enhle yokuthenga. Lapha ungathenga izicathulo nezingubo ezivela kubaklami bendawo. Talisa House, Biyan, Ghea noSebastian, Ali Charisma, Ferry Sunarto - lawa makhiqizo awaphindaphindiwe eYurophu, ngakho-ke unethuba lokuthenga into eyingqayizivele. Kodwa balungele ukuthi ama-Indonesiya abhonce izingubo zabahlali bendawo, ngakho kaningi ubukhulu obukhulu.
Isikhungo sokuthenga eshibhile esiseJakarta siseMalioboro futhi sinegama elifanayo. Lapha ungakwazi, isibonelo, uthenge i-jeans emihle ye $ 5. Kwezinye izindawo ezinkulu zokuthenga, izambatho zaseYurophu zinikwe ngamanani afanelekile.
ILaos - emaphandleni
I-Lacunar infarction yobuchopho
Yiziphi izinhlobo zika utamatisi ezikhiqiza kakhulu?
Yisiphi isithonjana esikhishwe ngaphezu komnyango wangaphambili?
Ngekhanda elisha u-Natalia Oreiro alitholwa kalula ngabalandeli
I-Jelly kusuka kumnyama omnyama we-recipe yasebusika
U-Moby uthumele okuthunyelwe ukuhleka usulu isiphakamiso esivela ekuphathweni kwe-Trump
Abaphathi bakaKesha bambheka ukuthi uyaphambuka ngempela
Indlela yokugcoba ukugeza ekhaya - izindlela ezinhle nezindlela
Ukubikezelwa kwe-Christmas for Christmas
Imibhede yebunk for teens
Ungasusa kanjani i-centipede endlini?
I-Cefotaxime - imijovo
Izindawo zokuhlala zoLwandle lwase-Azov eRussia
UMiranda Kerr wabonisa indandatho yokuzibandakanya
Ungadonsa kanjani i-bolero?
Ibhuloho yebhali - okuhle nokubi